Xuska tiiraanyadii Utöya oo ey ka soo wareegtay laba sannadood - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xuska tiiraanyadii Utöya oo ey ka soo wareegtay laba sannadood
Weli quluubta bulshada kama aanay go'in dhacdadii Utöya
La cusbooneeyay måndag 22 juli 2013 kl 11.45
La daabacay måndag 22 juli 2013 kl 09.10
Maanta oo taariikhdu tahay 22-ka bisha luulyo ayaa ku beegan sannad-guuradii labaad ee ka soo wareegtay dhacdadii argagixisada ee ka dhacday jasiiradda Utöya ee magaalada Oslo, middaasina oo gilgishay dhammaan quluubta bulshada ku dhaqan dalka Noorway iyada oo maalintan laga xusi doono goobo kala duwan ee dalkan Iswiidhen.
Ellinor Eriksson, ahna gacan-yaraha ururka dhallin-yarada ee xisbiga Sooshiyeel-dimoqoraadiga ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno (SSU) ayaa sheegtay mar ay wareeysi siisay idaacadda caalamiga raadiyaha Iswiidhen inuu is-bedel ku yimid hab-fekerkii ammaanka wixii ka dambeeyay dhacdadii jasiiradda Utöya:
- Waa xaqiiq inaan u baahneeyn in in badan laga fekero ammaanka iyadoona ey ugu wacan tahay ammaanka daraaddii iyo sidoo kale waaqiciga ammaan-darrada ee la soo marey. Waan iney dhammaan ammaan ku dareemaan dhallin-yarada ka qeyb-qaadaneysa shirarka uu ururka SSU soo abaabulo, waana howlo eynaan horay uga fekeri jirin, sida ay sheegtay.
Waxay ahayd 22 bishii luulyo ee sannadkii 2011 kolkii uu Anders Behring Breivik qudha kaga jaray jasiiradda Utöya 69 ruux. Kuwaasina oo badankood ahaayeen dhallin-yaro ka tir-sanayd ururka dhallin-yarada ee xisbiga shaqaalaha ee dalka Noorway oo uu kulan halkaasi uga socdey. Halka uu sidoo kale bam ku qarxay agagaarka xarunta madax-tooyada ee magaalada Oslo saacado hortood ey ku geeriyoodeen 8 ruux. Maanta oo iku beegan sannad-guuradii labaad ee dhacdadaa argagixisadu ku dheehnayd ayaa dalkan Iswiidhen goobo badan lagaga xusayaa dadyoowgii ku geeriyoodey, sida ay sheegtay Ellinor Eriksson:
- Xarumaha degmooyinka ee ururka ayaa lagu qaban doonaa ban-dhig-kulameedyo kala duwan la xiriira dhacdadii Utöya oo maanta ku aadan laba-sannad guuradii. Bandhigyadaasi oo kala ah riwaayado, baroor-diiq ama in wax lagu qoro buugagta tacsida. Waa dhacdooyin laga abaabuli doono goobo kala duwan ee dalka ka tir-san.
Dhacdooyinkaa mid ka mid ah ayaa fiidnimada maanlinta isniinta wuxuu ka dhici doona magaalada Malmö. Waa riwaayada lagu xuseyo magaalada Utöya oo lagu qaban doono barxadda Mollevångstorget oo dhacda bartamaha magaalada:
- Xaqiiqdii waxaa laga sameeyey fal-celisyo kala duwan oo ey ka bixiyeen dhammaan dadyoowgii aan kala xiriirney amuurtaa haddey noqon lahayd dhanka teknikada iyo howlaha masraxaba. Si aad u qiimo badan ayaa loo soo dhoweeyey fikirkan.
Inkastoo ey muddo laba sannadood ah ka soo waareegtay dhacdadii Utöya ayaaney qaar badan ee ka mid ah bulshada dalkan ku dhaqani xusuustooda ka go’in dhacdadaa, waana muhiim in la xasuusnaado sababta dhacdada Utöya ka dambeeysay, sida ay sheegtay Ellinor Eriksson:
- In la xasuusnaado iney ahaayeen dhallin-yaro kulan ku lahaa Utöya oo uu ku weeraray shakhsi aamin-san mabda’a neceeybka iyo faqooqa qoowmiyadaha kala duwan. Waana mid na xasuusineeysa baahida loo qabo in halkiisii laga sii wado maalin walba halganka looga hor-tageyo mabaadii’da neceebka iyo faqooqa. Iyo in la muujiyo maalin walba in fikirka uu qabay dembiilahaasi ahaa, yahana mid khaldan.